Fiandohan’ny Fahavaratra ao Koety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2017 4:07 GMT
Noho ny fitomboan'ny merkiora satria fahavaratra ao Koety, sahirana mitady fialam-boly amin'ity vakansin'ny fahavaratra ity ny bilaogera.
Anisan'izany i Zdistrict, izany nankany amin'ny nosy Kubbar. Nanoratra izy hoe:
Faran'ny herinandro somary mafana izao ka toa hevitra tsara ny mankany Kubbar, te hitsambinkina anaty rano mangatsiaka aho. 20 minitra teo no niomana handeha sambo, miandry olona vitsivitsy alohan'ny fiaingana ho any Kubbar. Nafàna toy ny helo tao ambony sambo, te hitsambikina avy hatrany tao anaty rano aho saingy somary maharikoriko ny rano ao Marina ka tsy sahy aho, fa naleoko nanisy vaingan-dranomandry teo amin'ny lohako, izay nitsonika haingana.
Mandritra izany, Desertgirlkuwait kosa nankany Kabd. Namaritra ny fivoahany tahaka izao izy:
abd is pronounced “chebd” in local dialect. “Chebd” means liver in Arabic. Don't ask me about the correlation. I don't know.
Tononina hoe “chebd” amin'ny tenim-paritra ny abd. “Chebd” dia midika volafotsy amin'ny teny Arabo. Aza manontany ahy momba ny fifandraisany. Tsy fantatro izany.
Hatramin'ny nanafoanan'ny governemanta ny faritra Funaitees manontolo ao Fahaheel Expressway (30) izay nisy ny ankamaroan'ireo tanimboly, saika ny mponina taloha manontolo no namindra ny tanimbolin'izy ireo tao Kabd. Tsy misy olona (ankoatra ny namako, M, izay noroahan'ny vadiny tao an-trano) monina ao amin'ireo toerana ireo satria natao ho ampiasaina amin'ny fambolena izy ireo. (Raha miteny aho hoe “fambolena” ny tiako ambara dia hoe “fety”.)
Chillnite indray nankany Kuwait Aquarium ary nanoratra hoe:
Nandritra ny faran'ny herinandro, nanapa-kevitra hitsidika ny Dobo fitaratra (Aquarium) Koety ao amin'ny Foibe Ara-tsiantifika Koety izahay. Teny tokana ‘Mahafinaritra‘…
Raha sempotry ny hafanana ianao, na reraky ny asa, na te-hanala azy kely…mankanesa any amin'ny dobo fitaratra.
Sary avy amin'i zdistrict